Gịnị mere Chineke ji mee ka obi Fero sie ike? ▷ ➡️
Gịnị mere Chineke ji mee ka obi Fero sie ike?. Fero Ramses nke Abụọ Ọ bụ onye na-akpa aka n’otu n’ime akụkọ kacha ike na Baịbụl. Ọpụpụ ahụ na-agwa anyị otú Chineke si taa ndị Ijipt ahụhụ ka ha napụta ndị Hibru n’ohu. Agbanyeghị, na akụkọ ahụ anyị na-ahụ a Chineke nwere ike ime ka obi mmadụ sie ike iji mezuo nzube ya. Ma gịnị mere o ji mee ya?
N'ime Akwụkwọ Nsọ anyị na-ahụ azịza niile:
1 Gịnị mere Chineke ji mee ka obi Fero sie ike dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo
1.1 Ihe Chineke mere Fero ọ̀ ezighị ezi?
Gịnị mere Chineke ji mee ka obi Fero sie ike dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo
Gịnị mere Chineke ji mee ka obi Fero sie ike dịka Akwụkwọ Nsọ si kwuo
Chineke mere ka obi Fero sie ike n’ihi na ọ chọrọ gosi ike Ya na nke ahụ E kwusara aha ya ala nile. Anyị na-achọta azịza a na Baịbụl. N'ọpụpụ Anyị na-ahụ na Chineke mere ka obi Fero sie ike, ma kpebie na ya agaghị ekwe ka ụmụ Izrel pụọ n’obodo ahụ na nnwere onwe:
M'gēme kwa ka obi Fero di ike, me kwa ka ihe-iriba-amam na ihe-ebubem ba uba n'ala Ijipt. Ma Fero agaghi-ege unu nti; ma M’gātukwasi akam n’aru Ijipt, were kwa ikpé uku dupu usu-ndi-agham, bú ndim, bú umu Israel, n’ala Ijipt.
Ọpụpụ 7: 3-4
Mgbe e mesịrị, Chineke zigaara Fero ozi site n’aka Mozis, nke anyị pụkwara ịgụ n’Ọpụpụ.
Ma n’ezie emewo m ka ị gosi ike m n’ime gị, ka e wee kwusaa aha m n’ụwa niile.
Site n'ike nke obi Fero; Chineke gosipụtara ike Ya n'ụzọ dị ebube, na-atọhapụ ndị Ya nke ịgba ohu na-eme ka akụkọ a na-akọ ruo taa, ka Ebube ya.
Ihe Chineke mere Fero ọ̀ ezighị ezi?
Ma mgbe ahụ, ọ̀ bụ ihe ziri ezi ka Chineke mee ka obi onye aka ya dị ọcha kwesie ike ịrụzu ọrụ Ya? Nsogbu dị na ajụjụ a bụ na anyị chere na ọ bụghị Fero kpatara akụkọ a. Ọbuná tutu Chineke asi na Ọ gēme ka obi Fero di ike; ya onwe-ya emewo ka obi-ya di arọ́.
Ma obi Fero di arọ́, o geghi kwa ha nti, dika Jehova siri.
Ọ dịkwa mma icheta nke ahụ Fero abụghị ezigbo mmadụ, dị nnọọ nta atụ egwu Chineke. Ndị Ijipt, site n'ọchịchị nke ndị Fero ha bụ ndị weere onwe ha dị ka ezi "chi", mere ka ndị Hibru ghọọ ohu ihe karịrị narị afọ anọ na na ọ na-ahụ maka ọtụtụ ọnwụ, dị ka n'ihe banyere ahụ wee gbuo ihe niile Hebrew ụmụ ọhụrụ na nwa.
Ndi Rom 9:18 Anyị na-agụ na Chineke "na-emere onye ọ chọrọ ebere, na-emekwa ka onye ọ chọrọ obi sie ike." Otú ọ dị, ọ dịghị onye a na-agbaghara ma ọ bụ kpatara mmehie nke onwe ya. Maka anyị echiche a nwere ike isiri anyị ike ịnakwere, mana anyị maara nke ahụ Chineke dị mma na ikpe ziri ezi, na mgbe niile nwere ezi nzube imezu, maka ebube Ya.
Ya mere, onye ọ chọrọ, ọ na-emere ebere, ma onye ọ bụla ọ chọrọ ime ka obi sie ya ike.
Ndị Rom 9: 18
Nke a bụ ya! Anyị nwere olile anya na edemede a nyere gị aka ịghọta gini mere Chineke ji mesie obi Fero ike. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ugbu a ihe mere e ji mee Jizọs baptizim, na-eme nchọgharị Discover.online.
Kedu ka anyị ga-esi tụfuo nzọpụta